Kugadzira makadhi ekudzidza. Dzimwe sarudzo dzakavhurika sosi | Linux Vakapindwa muropa
Kugadzira makadhi ekudzidza. Dzimwe sarudzo dzakavhurika sosi
Makadhi ekudzidza ndeimwe yematurusi ekudzidza anobudirira sezvo vachityaira kutora chikamu kwekurangarira mukudzidza.
Pakutanga vaive kadhibhodhi rectangles kune rimwe divi iro rakanyorwa mubvunzo uye mhinduro kune rimwe. Parizvino pane mafomu emakomputa uye nhare mbozha izvo Ivo vanozadzisa zvakafanana basa, asi nekubatanidzwa kwemultimedia zvemukati.
Mune ino post tichaona mamwe akavhurika sosi maturusi atinogona kushandisa kugadzira nekuadzokorora.
1 Nguva yekushandisa kadhi rekudzidza
1.1 Zvinowanzoitika zvikanganiso
1.2 Mamwe mazano ekuti ungashandise sei
1.2.1 1. Gadzira makadhi ako ega
1.2.2 2. Sanganisa mifananidzo nemazwi
1.2.3 3. Shandisa nzira dzekumusoro kugadzira kubatana kwepfungwa
1.2.4 4. Shandisa iyo KISS musimboti
1.2.5 5. Enda pamusoro pemakadhi nenzira mbiri
2 Kugadzira makadhi eChidzidzo. Dzimwe sarudzo dzekuvhura sosi
Nguva yekushandisa kadhi rekudzidza
Flashcards anouya anobatsira kana zvasvika pakudzidza hukama pakati pezvidimbu zviviri zveruzivon. Iwo akakosha pakudzidza madudziro mapfupi kana mazwi emazwi. Asi kana zvasvika pakudzidza ruzivo rwakarongwa mumatanho akaomarara, zvakanakisa kusarudza dzimwe nzira.
Kukundikana kwakanyanya paunenge uchishandisa makadhigadhi ndeaya:
Vashandise kuyeuka nemusoro vasinganetseke nezvekunzwisisa zvirimo.
Kusanganisira yakawandisa ruzivo mumhinduro izvo zvinoita kuti zviome kubata mumusoro nekuvapindura zvizere.
Mamwe mazano ekuti ungashandise sei
1. Gadzira makadhi ako ega
Kunyangwe akawanda mapurogiramu nemawebhusaiti achikubvumidza iwe kudhawunirodha flashcard kuunganidzwa, uyekuzvigadzira chimwe chikamu chedzidziso. Nekukamura zvinyorwa kuita mibvunzo nemhinduro uye nekupfupisa izvi mumazwi ako, unogadzira kubatana kweiyo neural kunobatsira maitiro ekurangarira.
2. Sanganisa mifananidzo nemazwi
Zvinozivikanwa kuti ikusanganisa chifananidzo icho neimwe nzira chine hukama nemazwi ari mumhinduro anobatsira kuabata nemusoro. Ngatiti iwe unofanirwa kuyeuka zita rezvikamu zvina zveLinux; CentOS, Ubuntu, Linux Mint, uye OpenSuse. Kusanganisira marogo pamusoro pemazita kuchabatsira zvakanyanya kupfuura kungonyora mazita.
3. Shandisa nzira dzekumusoro kugadzira kubatana kwepfungwa
Maitiro emunemonic ndiyo imwe inokubatsira iwe kuvaka hukama pakati pezvidimbu zviviri zveruzivo mupfungwa dzako.
Zvemakadhi ekudzidza, zvakanakisa kushandisa maAcronyms nemifananidzo. Semuenzaniso, neyekutanga 4 yezvipo pamusoro apa tinogona kugadzira OCUL. Naiyo yataigona kuisa mamwe ma binOCULars kana kadhi reOCUList.
Iri ibhuku rakakomba, ndokumbirawo urege kuita zano rawanga uchifunga nezvaro kubvira pandakaita muenzaniso.
4. Shandisa iyo KISS musimboti
KISS chidimbu muChirungu Ramba Uchireruka, Benzi! "Chengeta zviri nyore, benzi!"
Mibvunzo yacho inofanira kunge iri panguva uye mhinduro dzinofanira kunge dziri pfupi. Kana iwe uchifanira kubata nemusoro marefu uye akaomarara mhinduro, shandisa akati wandei emadhigadhi.
5. Enda pamusoro pemakadhi nenzira mbiri
Kuti kudzidza kuve kwakakwana, mibvunzo nemhinduro zvinofanirwa kuchinjaniswa.
Kugadzira makadhi eChidzidzo. Dzimwe sarudzo dzekuvhura sosi
Chirongwa ichi inokutendera iwe kusarudza pakati pezvakasiyana dhizaini uye mhinduro nguva uye nguva. Inotsigira zvemultimedia zvemukati uye nekuwiriranisa newebhu. Unyanzvi hwaAnki hunowedzerwa neakateedzana ewedzero
Iyo purogiramu inowanikwa yeWindows, Linux, Mac, uye nhare mbozha. Iyo zvakare ine webhu vhezheni.
Chirongwa inoshandisa algorithm kuratidza kakawanda iyo mibvunzo iyo mushandisi inoona zvichinyanya kuoma kubata mumusoro. Inogamuchira matatu-mativi makadhi. Izvi zvinobatsira, semuenzaniso, kudzidza mitauro, parutivi rwekutanga izwi mumutauro wekutanga, rwechipiri chimiro chakanyorwa uye chechitatu kududzwa.
Iyi purogiramu inowanikwa yeWindows, Linux, Mac, uye Android.
Pfungwa yekutanga ye OpenCards ndeyekushandisa mharidzo dzePowerPoint (* .ppt) kana maMarkdown mafaira (* .md) sekadhi kadhi. Nenzira iyi, mazita emasiraidhi anomiririrwa semibvunzo nezviri mumasiraidhi semhinduro dzavo. Iyo purogiramu inoshandisa kudzidza algorithms kusarudza iyo maratidziro uye kuwanda nezvavanoratidzwa nazvo.
Pane shanduro dzeWindows, Linux neMac
Es chikumbiro zvichibva paLeitner memory kadhi system.
Makadhi anogona kusanganisira akadzika akanzwika, mifananidzo, uye masvomhu mafomula (kuburikidza neLaTeX). Iwe unogona kuendesa kunze kwenyika mune akasiyana mafomati mafomati, kusanganisira CSV.
Iyo purogiramu chete ine vhezheni yeLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kugadzira makadhi ekudzidza. Dzimwe sarudzo dzakavhurika sosi